आकाशबाट पृथ्वीमा आउँदैछ ‘ठूलो प्र’कोप’, नासाको यस्तो चे’तावनी ! – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / आकाशबाट पृथ्वीमा आउँदैछ ‘ठूलो प्र’कोप’, नासाको यस्तो चे’तावनी !
आकाशबाट पृथ्वीमा आउँदैछ ‘ठूलो प्र’कोप’, नासाको यस्तो चे’तावनी !
admin November 9, 2021 अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 97 Views
नासाले एफिल टावर जत्तिकै ठूलो क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको बताएको छ । यो क्षुद्रग्रह डिसेम्बरमा पृथ्वीको नजिक आउनेछ । यो क्षुद्र ग्रहलाई ४६६० नेरियस नाम दिइएको छ । यसलाई ‘सम्भावित खत’रनाक क्षुद्रग्रह’ (PHA) को रूपमा पनि वर्गीकृत गरिएको छ ।
नासाको एस्टेरोइड मनिटर डिपार्टमेन्टले डिसेम्बर ११ मा यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिक आउने भविष्यवाणी गरेको छ । क्षुद्रग्रह एफिल टावर भन्दा ठूलो छ । यसलाई नासाले ‘सम्भावित ख’तरनाक क्षुद्रग्रह’ को श्रेणीमा राखेको छ ।
अन्तरिक्ष सन्दर्भ अनुसार, ४६६० नेरियस ३३० मिटर लामो छ, जसले यसलाई क्षुद्रग्रहको ९० प्रतिशत भन्दा ठूलो बनाउँछ । यस विशाल क्षुद्रग्रहबाट पृथ्वीलाई खतरा हुन सक्छ, तर य’सको दूरी पृथ्वीभन्दा धेरै पर छ । यो क्षुद्रग्रहले पृथ्वी ग्रहलाई कुनै खतरा दिने छैन ।
पृथ्वीबाट ४६६० नेरियस ना’मको क्षुद्रग्रहको दूरी ३९ लाख किलोमिटर रहेको बताइएको छ । नेरियस अपोलो समूहको एक क्षुद्रग्रह सदस्य हो, जुन सन् १९८२ मा पत्ता लागेको थियो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार नेरियस मार्च २, २०३१ मा पुन: पृथ्वीबाट गुज्रनेछ । त्यसपछि यो नोभे’म्बर २०५० मा पृथ्वीको नजिक आउनेछ । यसपछि फेब्रुअरी २०६० मा यो पृथ्वीको नजिक पुग्नेछ ।
क्षुद्रग्रहहरू प्रायः हाम्रो पृथ्वीको नजिकबाट गुजरिरहन्छन् । जब यी विशाल क्षुद्रग्रहहरू पृथ्वीको नजिक पुग्छन्, खतरा पनि बढ्छ । यी खतराहरूको बारेमा, नासाले पृथ्वीलाई ख’तराहरूबाट भविष्यवाणी गर्छ र चेतावनी दिन्छ ।
Previous बाँ’दरलाई छोरा बनाएका टि’क ट’कमा भाइरल आमा छोरा, ख’प्पिस टि’क ट’क बनाउन(भिडियो हेर्नुस)
Next आमाले ऋण तिर्न नसकेपछि साउले छोरीलाई भगाएर लगे, प्रहरीले मन्दिरमा बिहे गराइदियो